Linn Ko: Samsung Galaxy SIII 4.2.2 Official Jellybean Leaked Firmware
Samsung Galaxy SIII 4.2.2 Official Jellybean Leaked Firmware
Samsung Galaxy S3 သမားများအတွက် 4.2.2 Official Jellybean Leaked Firmware ထွက်ရှိလာတာကြောင့် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျတင်နိုင်ရင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီ 4.2.2 Rom မှာ Gallery တွေ အရမ်းလန်းလာပါတယ် ..Noti Bar မှာ Toggles များစွာထည့်နိုင်တာ Multiwindow
စနစ်တွေ အပြင် နောက်ထပ် လန်းတဲ့ Features များစွာ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ် ..
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းပါမယ်. .
Galaxy S3 4.2.2 jellybean leaked firmware ဒေါင်းရန် (DevHOst link)
Galaxy S3 4.2.2 jellybean leaked firmware ဒေါင်းရန် (Torrent link)
Galaxy s3 4.2.2 jellybean leaked firmware ဒေါင်းရန် (mediafire link)password – MMAS
Odin 3.04 ဒေါင်းရန်
Driver ဒေါင်းပြီးရင် PC မှာ သွင်းထားပါ….. Firmware ဖိုင်ထဲက Odin ကို Zip ဖြည်ပါ ..
Firmware ဖိုင် ရရင် အထဲမှာ I9300XXUFME3_I9300OJKFME1_HOME.tar.md5 ရယ် SS.DLL ရယ်နှစ်ဖိုင်ထွက်ပါမယ် … Odin ကို Zip ဖြည်ပြီး Computer မှာ Run ပါ.. Odin ရဲ့ PDA မှာ Firmware Zip ဖြည်ထားတဲ့အထဲက I9300XXUFME3_I9300OJKFME1_HOME.tar.md5 ဖိုင်ကို သွင်းပေးပါ…ကျန်တဲ့ဖိုင် မယူပါဘူး …
ပြီးရင် ဖုန်းကို ပိတ် Download Mode ၀င်ပါမယ်.. Vol Down + Power + Home တွဲနှိပ်ပြီး ၀င်ပါ.. စာပေါ်လာရင် Volume Up နှိပ်ပါ... အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါမယ်
ဒုတိယပုံအတိုင်း Downlaod Mode ရောက်ပါမယ် …
ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ PC မှာ ထိုးပါ …… Odin ရဲ့ ID.com အောက်နားမှာ အရောင်လေးသမ်းပါမယ်..
အပေါ်က ပုံစံအတိုင်း ID.com အောက်မှာ အရောင်သမ်းရင် ဆက်လုပ်ပါမယ် ..အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် Driver, ကြိုးတွေ ပြန်စစ် ပြန်သွင်းပါ…
အရောင်သမ်းလာရင် Odin က Start ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ … သူ့ဟာသူ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်…. ခဏကြာရင် Odin မှာ PASS ပြပါမယ် ….အောက်ပါပုံအတိုင်းပါ ..
အထက်ပါပုံအတိုင်း PASS ပြရင် ဖုန်းက Auto Rreboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်.. ဖုန်းကို PC ကနေ ဖြုတ်လိုက်ပါ ….. ပါဝါပြန်တက်လာရင် Samsung Galaxy S3 Official Jellybean 4.2.2 တင်ခြင်း ပြီးပါပြီ…. ပါဝါတက်လာလို့ Samsung Logo မှာ ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေရင် ဖုန်းကို ဓာတ်ခဲ့ဖြုတ်ပါ..ပြီးရင် Recovery Mode ကို Vol Up + Power + Home တွဲနှိပ်ပြီး ၀င်ပါ …..အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နေပါမည်..
Wipe Data/ Factory Reset ဆီရောက်အောင် Volume ခလုတ်နဲ့ ရွေ့ပါ .. ရောက်ရင် Power ခလုတ်နိပ်လိုက်ပါ …… ပြီးရင် Reboot System Now နှိပ်လိုက်ပါ … ပြန်တက်လာရင် မိမိရဲ့ ဖုန်း Samsung Galaxy S3 Jellybean 4.2.2 တင်ခြင်း အောင် မြင်သွားပါပြီ..
Credit to Myanmar Mobile App
Posted by Linn Ko at 2:07 PM